I-china 6 ungqimba lwe-impedance control rigid-flex board elinabakhiqizi bezinto eziqinile nabaphakeli | Kangna
6 ungqimba impedance control rigid-flex board with stiffener
Uhlobo lwento: FR-4, polyimide
Min imbobo usayizi: 0.15mm
Iqedile ukujiya kwebhodi: 1.6mm
Ubukhulu be-FPC: 0.25mm
Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-20
Ukuzalwa nokuthuthukiswa kwe-FPC ne-PCB kubelethe umkhiqizo omusha webhodi eqinile ye-flex. Ngakho-ke, ku-PCB prototyping, ibhodi lesifunda eliguquguqukayo nebhodi eliqinile lihlanganiswe ndawonye ngokuya ngezidingo ezifanele zobuchwepheshe ngemuva kokucindezela nezinye izinqubo zokwenza ibhodi lesifunda elinezimpawu ze-FPC nezici ze-PCB.
Ku-PCB prototyping, inhlanganisela yebhodi eqinile ne-FPC inikeza isixazululo esihle kakhulu ezimweni ezikhawulelwe zesikhala. Lobu buchwepheshe buhlinzeka ngamathuba okuxhuma ngokuphepha izingxenye zedivayisi ngenkathi kuqinisekiswa ukuzinza nokuxhumana, futhi kunciphisa inani lezingxenye ze-plug nezixhumi.
Ezinye izinzuzo zebhodi le-rigid_flex ukuzinza okunamandla nokwenziwa kwemishini, okuholela kwinkululeko yokuklama engu-3d, ukufakwa okwenziwe lula, ukonga isikhala, kanye nokugcinwa kwezimpawu ezifanayo zikagesi.
Ngesandla Esiqinile-Flex PCB Ukubumbela Izicelo:
Ama-PCB e-Rigid-Flex anikezela ngezinhlelo zokusebenza eziningi, ezisukela kumadivayisi ahlakaniphile kuya kumaselula nakumakhamera edijithali. Ngokuya ngokwanda, ukwenziwa kwebhodi eliqinile le-flex kusetshenziswe kumadivayisi wezokwelapha afana nama-pacemaker esikhala sawo namakhono okunciphisa isisindo. Izinzuzo ezifanayo zokusetshenziswa okuqinile kwe-PCB zingasetshenziswa ezinhlelweni zokulawula okuhlakaniphile.
Emikhiqizweni yabathengi, i-rigid-flex ayigcini ngokwandisa isikhala nesisindo kepha ithuthukisa kakhulu ukuthembeka, isuse izidingo eziningi zamalunga we-solder kanye nentambo entekenteke, entekenteke ethambekele ezindabeni zokuxhuma. Lezi ngezinye nje zezibonelo, kepha ama-PCB aqinile e-Flex angasetshenziswa ukuzuzisa cishe zonke izinhlelo ezithuthukisiwe zikagesi kufaka phakathi imishini yokuhlola, amathuluzi nezimoto.
Ngesandla Esiqinile-Flex PCBs Technology and Production Process:
Noma ngabe kukhiqizwa uhlobo oluqinile oluguquguqukayo noma inani lokukhiqiza elidinga ukwenziwa okukhulu kwe-PCB eqinile ye-Flex kanye nomhlangano we-PCB, ubuchwepheshe bufakazelwe kahle futhi bunokwethenjelwa. Ingxenye ye-PCB eguquguqukayo inhle kakhulu ekunqobeni izingqinamba zesikhala nezesisindo ngamazinga wenkululeko.
Ukucatshangelwa ngokucophelela kwezixazululo ze-Rigid-Flex kanye nokuhlolwa okufanele kwezinketho ezitholakalayo ezigabeni zokuqala esigabeni sokuklanywa se-PCB esiqinile kuzobuyisa izinzuzo ezinkulu. Umqambi wezinto we-Rigid-Flex PCBs kumele abambe iqhaza ekuqaleni kwenqubo yokuklama ukuqinisekisa ukuthi izingxenye zokuklama nezendwangu zombili ziyasebenzisana futhi ziphendula ngokuhluka komkhiqizo wokugcina.
Isigaba sokukhiqiza seRigid-Flex naso siyinkimbinkimbi futhi sidla isikhathi kunokuqanjwa kwebhodi eliqinile. Zonke izingxenye eziguqukayo zomhlangano weRigid-Flex zinokuphatha okuhluke ngokuphelele, ukuchibiyela, kanye nezinqubo zokufaka izinsimbi kunezibhodi eziqinile ze-FR4.
Izinzuzo ze-PCB eziqinile-ze-Flex
• Izidingo zesikhala zingancishiswa ngokusebenzisa i-3D
• Ngokususa isidingo sezixhumi nezintambo phakathi kwezingxenye eziqinile ngazinye, usayizi webhodi nesisindo sohlelo jikelele kungancishiswa.
• Ngokukhulisa isikhala, kuvame ukubalwa okuphansi ezingxenyeni ezithile.
• Ambalwa amalunga we-solder aqinisekisa ukuthembeka okuphezulu kokuxhuma.
• Ukuphatha ngesikhathi sokuhlangana kulula uma kuqhathaniswa namabhodi aguquguqukayo.
• Izinqubo zomhlangano we-PCB owenziwe lula.
• Oxhumana nabo abahlanganisiwe be-ZIF banikela ngokuhlangana okulula kwe-modular kumvelo yohlelo.
• Izimo zokuhlola zenziwa lula. Ukuhlolwa okuphelele ngaphambi kokufakwa kungenzeka.
• Izindleko zokuhamba nezokuhlangana zincishiswa kakhulu ngamabhodi e-Rigid-Flex.
• Kungenzeka kwandiswe ubunzima bokuklanywa kwemishini, okubuye kuthuthukise izinga lenkululeko yezixazululo zezindlu ezisetshenzisiwe.
Csisebenzisa i-FPC ukufaka esikhundleni sebhodi eliqinile?
Amabhodi wesifunda aguquguqukayo ayasebenziseka, kepha ngeke athathe indawo yamabhodi wesifunda aqinile kuzo zonke izinhlelo zokusebenza. Izindleko zibalulekile,. Amabhodi wesifunda aqinile abiza kancane ukukhiqiza nokufaka endaweni ejwayelekile yokuzakhela ivolumu ephezulu.
Imvamisa, isixazululo esifanele somkhiqizo omusha ngesinye esifaka ukujikeleza okuguqukayo lapho kunesidingo futhi sisebenzise amabhodi wesifunda aqinile, athembekile lapho kungenzeka khona ukugcina izindleko zokukhiqiza nezokuhlangana zinciphile.
Langaphambilini Umzimba omncane we-FPC ogoqekayo nge-FR4 stiffener
Olandelayo: Resin wokufaka imbobo Microvia Ukucwiliswa isiliva HDI nge laser imishini
okusheshayo multilayer High Tg Ibhodi ngokucwiliswa go ...
esheshayo jika prototype igolide Plating PCB ne Coun ...
8.0W / mk okusezingeni eliphezulu ezishisayo conductivity MCPCB ngoba El ...